Indhaha Gaaladu Maalintaas waa dullaysan tahay waxaana ku muuqda Walbahaar iyo qoomamo, waxayna ahaayeen (Adduunka) kuwa loogu yeeray Sujuud iyagoo nabad qaba.
Isu kaana daa aniga iyo kuwa beeniyey Quraanka waana sasabi iyagoon ogeyn.
Waana sugi tan iyo muddo, Maamulka Eebana waa xoog badan yahay.
Nabiyow ma waxaad weydiisatay Gaalada Ujuuro oo markaas Cuslleeyey.
Mise waxa maqan yaa aktooda yaal ooy wax ka qori.
Ku samir Xukunka Eebe hana noqonin sidii Saaxiibkii Xuudka (Mallayga Yuunus) markuu naadiyey Eebihiis isaga oo walbahaarsan.
Haddan naxariista Eebe haleelin waxaa lagu tuuri lahaa Cidlo (bannaan) isagoo la dagaalay.
Waxaase doortay Eebihiis wuxuuna ka dhigay kuwa wanaagsan.
Waxay u dhow yihiin kuwi gaaloobay inay daymada kugu lagdaan markay maqlaan Qur'aanka waxayna dhihi waa waalan yahay (Nabigu).
Maalinta Xaaqo (Qiyaamadu waa wax sugan).
Xaaqo maxay tahay.
Thamuudse waxaa lagu halligay Qaylo daran.
Caadna waxaa lagu halligay Dabayl daran oo qabow.
oo lagu diray korkooda Toddoba habeen iyo Siddeed Maalmood oo iraacsan, waxaadna arkaysaa iyagoo daadsan ood mooddo jirrid Timir (dogob dhacay).